Bangiyada Itobiya oo inay musalafaan Qarka u saaran. | ogaden24
Bangiyada Itobiya oo inay musalafaan Qarka u saaran.
Jan 20, 2017 - Aragtiyood
Guud ahaan suuqyada magaalada Addis ababa ee wax lagu kala iibsado waxaa Hadheeyay walaac xoogan oo kadhashay siyaasad cusub oo maamulka Woyanuhu u dajiyay Bangiyada iyo sarifka Lacagaha Qalaad ee muhiimka ah.
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in sicirka sarifka ee magaalada Addis Ababa uu cirka isku shareeray kadib markii laga waayay Bunuugta kala duwan ee ka hawl gala magaalada Addis Ababa lacagta adag ee doolarka maraykanka ah, taasi oo adkaysay dhaq dhaqaaqyadii kala duwanaa ee Ganacsatada magaalada Addis ababa oo inta badan dibadaha kuxidhan.
Ganacsatada iyo maalgaliyeyaasha caalamiga ah ayaa wixii hanti utaalay dalka Itoobiya kala baxay kadib markii uu wadanka hadheeyay kacdoonadii ay shucuubta ku hoos dulman Woyaanaha saameeyeen, kuwaasi oo guud ahaan maciishada iyo xasiloonida dalka u horseeday khatar iyo inay adkaato helitaanka lacagaha adag ee ganacsatadu dibada wax kaga soo iibsan jireen.
Dhinaca kale Bangiyada ayaa ku dhawaaqay inaysan wax kaash ah oo ay bixiyaan aysan khaznadaha bangiyada oolin taasoo walaac iyo walwal badan ku abuurtay macaamiishii kala duwanaa ee hantidu utiilay bangiyada.
Waxaa kaloo arintan sii murgiyay markii ay masuuliin Woyaanaha kamid ah hantidii shacabka boob badheedh ah ku qaadeen kadibna ay wadanka dibadiisa ula baxsadeen.
Warku waxaa uu sheegaya in suuqyada madoow ee magaalada Addis Ababa lagu kala sarifanayay maalmahan qiimihii ugu sareeyay Lacagta dollarka, waxaana Halkii dollar uu gaadhay 28 Birr Ka Itoobiya ah hadiiba la arko doolarka Maraykanka.
Sidoo kale maciishada ayaa cirka isku shareertay kadib sicir barar balaadhan oo guud ahaan wadanka hadheeyay marka laga yimaado shidaalka oo haatan cidhiidhi kujira, waxaa meeshii ugu saraysay gaadhay Qiimaha maciishada daruuriga u ah dadka Itobiyanka ah.